Google Antitrust Suit waa Harbinger ka mid ah Biyo Qallafsan oo loogu talagalay isbeddelada IDFA ee Apple | Martech Zone
In badan oo soo socda, dacwadda ka dhanka ah kalsoonida shirkadda 'DOJ' ee ka dhanka ah Google ayaa timid waqti muhiim u ah warshadaha tiknoolajiyadda xayeysiiska ah, maaddaama suuqleydu ay u tiirinayaan curyaaminta Apple Aqoonsiga Xayeysiistayaasha (IDFA) isbeddelo. Iyadoo Apple sidoo kale lagu eedeeyay warbixintii 449-bog ee dhowaan ka soo baxday Aqalka Wakiilada Mareykanka ee ku takri-falka awooddeeda gaarka ah, Tim Cook waa inuu si taxaddar leh u miisaamayaa tallaabooyinka uu qaadayo.
Xakamaynta Apple ee xayeysiiyayaashu miyeey ka dhigi kartaa shirkad tiknoolajiyad ah oo xigta oo la geeyo? Taasi waa su'aasha $ 80 bilyan ee warshadaha tiknoolajiyadda xayeysiinta ay hadda ka fiirsanayaan.
Iminka, Apple Inc. waxay umuuqataa inay kudhagan tahay dhagxaan iyo meel adag: waxay malaayiin ku qarash gareeysay inay isku muujiso inay tahay shirkad udub dhexaad u ah adeegsiga asturnaanta, iyo sameynta bedelida IDFA, oo ahayd aasaaska udub dhexaadka shaqsiyadeed xayeysiinta dhijitaalka ah sanadaha. Isla mar ahaantaana, ka takhalusida IDFA iyada oo loo rogayo nidaamkeeda lahaanshaha ee SkAdNetwork, ayaa ka dhigi doonta Apple inay xitaa u badan tahay inay u sharaxan tahay dacwad ka dhan ah kalsoonida.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo dib loo dhigay dhowaan IDFA isbeddelada horaantii 2021 Apple wali waxay haysataa waqti ay ku bedesho dhabbihii ay hadda ku jirtay ayna iska ilaaliso raacitaanka raadadka Google. Way fiicnaan laheyd shirkada weyn ee teknoolojiyadda inay fiiro gaar ah u yeeshaan kiiska Google isla markaana ay sii wadaan IDFA ama ay dib u horumariyaan SkAdNetwork-ka qaab aan ka dhigayn in xayeysiiyayaashu ay gabi ahaanba ku tiirsanaadaan xogta isticmaale ee keligood ah.
Qaabkeeda hadda, Apple ayaa soo jeedisay SkAdNetwork waxay umuuqataa tallaabo xitaa ka weyn oo kali kali kali ku ah wixii Google ku samaysay warshadaha raadinta. In kasta oo Google uu yahay laacibka ugu weyn ee duurka ku jira, uguyaraan, waxaa jira matooro kale oo raadinta beddel ah oo macaamiisha si xor ah u isticmaali karaan. IDFA, dhanka kale, waxay saamayn kuleedahay nidaamka deegaanka oo dhan xayeysiiyaasha, suuqleyda, bixiyeyaasha macluumaadka macaamiisha, iyo kuwa soosaara barnaamijyada oo leh dooq yar laakiin aan kubad la ciyaarin Apple
Maaha markii ugu horaysay ee Apple ay adeegsato gacanteeda sare si ay suuqa ugu qasabto in ay u hogaansanto. Bilihii la soo dhaafay, horumariyeyaasha barnaamijku waxay gadaal ka riixayeen khidmadda 30% ee Apple ee dhammaan iibka laga sameeyay dukaamada barnaamijyadooda - oo ah caqabad weyn oo ku saabsan lacag-bixinta. Kaliya shirkadaha sida weyn u guuleysta sida Epic Games xitaa waxay awood u leeyihiin inay la dagaallamaan dagaal xagga sharciga ah shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda. Laakiin xitaa Epic illaa iyo hadda kuma guuleysan in lagu qasbo Apple.
Hase yeeshe, xawaaraha hadda socda, dacwadaha ka dhanka ah kalsooni-darrada socota waxay qaadan doontaa waqti dheer si ay u saameyn ugu yeelato isbeddel macno leh warshadaha xayeysiiska. Daabacayaasha ayaa ka xumaaday in dacwada ka dhanka ah Google ay inta badan diirada saarto heshiisyada qeybinta ee shirkada taas oo ka dhigeysa mashiinka raadinta asalka laakiin waxay ku guuldareysatay inay wax ka qabato waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin ee ku saabsan dhaqamada shirkada ee xayeysiinta internetka.
Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan ay sameeyeen saraakiisha tartanka UK, kaliya 51 senti 1dii doolar ee kasta oo lagu kharash gareeyo xayeysiinta gaadho madbacadda. 49ka soo hadhay ayaa si fudud uguumi baxa silsiladda sahayda dhijitaalka ah. Si cad, waxaa jira sabab ay daabacayaasha ugu jahwareersan yihiin arrintaas. Kiiska DOJ wuxuu iftiiminayaa xaqiiqda qallafsan ee warshadeena:
Waan ku dhagannahay.
Ka-guurista qaska aan abuurnay waxay noqon doontaa geedi socod aad u jilicsan, gaabis ah, oo daal badan. In kasta oo DOJ ay ku qaadatay tallaabooyinka ugu horreeya Google, haddana waxaa hubaal ah in Apple ay indhaha ku hayaan sidoo kale. Haddii Apple ay rabto inay ku sugnaato dhinaca midig ee taariikhdan sameynta, shirkadda weyn waa inay bilaabaan inay ka fekeraan sida ay ula shaqeyn karto warshadaha xayeysiiska halkii ay isku dayi lahaayeen inay xukumaan.
Eric Grindley waa khabiir suuq geyn & sumadeyn ah, qareen, iyo Aasaasaha & Maamulaha Esquire Advertising, oo ah shirkad xayeysiis xayeysiis xayeysiis ah iyo mid ka mid ah 10ka shirkadood ee ugu xayeysiinta / suuq geynta ah 2020 Inc. 5000.